Xidiga Real Ee Marcos Asensio Oo Si Dad Badan U Doortay Midka Fiican Messi Iyo Ronaldo %
Xidiga garabka uga dheela Real Madrid iyo qaranka Spain ee Marcos Asensio, ayaa wuxuu sheegay inuu codkiisa ugu shubi lahaa, hadii ay timaado midka aduunka ugu fiican labadda wiil oo ay dunida uwaabsan tahay ee Lionel Messi iyo Crsitiano Ronaldo.
Messi ayaa wuxuu hada dhaliyay marka loo eego sanad ciyaareedkan horyaalka La Liga 25 gool, wuxuuna yahay mid hogaaminaya tartanka gooldhalinta ee La Liga, laakiin Ronaldo ayaa ah mid kaliya usoo jira Saddex gool oo qura.
Sikastaba, Asensio oo wareysi gaar ah siinayay wariyaasha ka hor kulamada saaxibtinimo, ee u dheelayo isbuucaan wadankiisa, ayaa wuxuu cod dheer ku sheegay in Messi iyo Ronaldo ay yihiin ciyaaryahano waa weyn CR7 uu isaga dhinaciisa jiro.
“Sanad walba wuxuu sameeyaa [Ronaldo] wax cajiib ah wuxuuna gaaraa talaabooyin waa weyn oo cajiib ah,” ayuu yiri Asensio.
“Messi iyo Ronaldo waa labo ciyaaryahano oo waa weyn, kuwaasoo gaaray hadafyo waa weyn oo kala duwan,” ayuu hadalkiisa ku daray.
“Laakiin, aniga waxaan ahay mid diirada saaraya Ronaldo, maxaa yeelay isaga ayaa ah mid agagaargeyga taagan,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay, Da’yarka garabka weerarka bidix uga dheela Los Blancos iyo waliba wadanka Spain.